लकडाउने छेकेन खाद्यान्न आयात रोक्न, २९ औं दिन सम्म ७८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात - कृषि पत्रिका
लकडाउने छेकेन खाद्यान्न आयात रोक्न, २९ औं दिन सम्म ७८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात
बिहिबार ११ बैशाख, २०७७	comments
ललितपुर। लकडाउन शुरु भएपछिको २९ दिनमा ७८ हजार मेट्रिक टन (मेट) खाद्यान्न आयात भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार गत चैत ११ देखि यही वैशाख १० गतेसम्म ७७ हजार ५७८ मेट खाद्यान्न आयात भएको हो ।
सो समयमा २४ हजार २१८ मेट दलहन, ४० हजार ९९ मेट तरकारी, १० हजार ८१८ मेट फलफूल र १० हजार ९९६ मेट दुग्धजन्य पदार्थ आयात गरिएको छ । त्यस्तै रू. ९७ करोड ६९ लाख ७६ हजार बराबरको तयारी औषधि र रू. २१ करोड ९१ लाख १६ हजार बराबरको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै दुग्धजन्य पदार्थ ११७ दशमलव ४ प्रतिशतले आयात बढेको छ । त्यसपछि तयारी औषधि ६८ दशमलव ८ प्रतिशत र खाद्यान्न ३७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ ।
फलफूल ३४ दशमलव ३ प्रतिशत, दलहन २४ दशमलव ४ प्रतिशत, तरकारी ४ दशमलव ५ प्रतिशत र औषधिको कच्चा पदार्थ २ प्रतिशतले घटेको छ ।
भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्ना सबै नाका बन्द गरेकाले गत चैत २७ गतेपछि झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान आयात तथा निर्यात ठप्प भएको छ । लकडाउनका अवधिमा वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीबाट २३० ट्रक भित्रिएको र १७९ ट्रक बाहिरिएको तथा ६८३ ट्रक रोकिएका छन् । त्यस्तै वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट ९० ट्रक भित्रिएको, सात ट्रक बाहिरिएको र ३ हजार १५५ ट्रक रोकिएका छन् ।
तातोपानी नाकाबाट यही वैशाख ४ गतेयता पाँच कन्टेनर र एक ट्रक औषधिजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिएका छन् । वैशाख ४ गते एक ट्रक, वैशाख ६ गते एक कन्टेनर र वैशाख ७ गते चार कन्टेनर नेपाल भित्रिएका छन् ।
चीनमा कोराना भाइरसको संक्रमण बढेपछि गत माघ १३ गतेदेखि बन्द तातोपानी नाका नेपाल सरकारले चैत १२ गते अत्यावश्यक सामान ल्याउनका लागि खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।